Madasha Xisbiyada oo Eedeyn Culusna U Jeedisay DFS - Awdinle Online
Madasha Xisbiyada oo Eedeyn Culusna U Jeedisay DFS
War-saxaafadeed Deg-deg ah oo Goordhow ka soo baxay Madasha Xisbiyada Qaran ayaa waxaa walaac looga muujiyay dagaallada sokeeye ee soo noqnoqday ee ka dhacaya deegaannada Soomaaliyeed.
“Madashu waxay u aragtaa inay gacmo siyaasadeed ku lug leeyihiin colaadaha soo noqnoqdey.
Madashu waxay u taagan tahay Dhiirigalinta nabadda, xasiloonida iyo dariswanaagga, Ilaalinta sharafka, dhiigga, maalka shaqsiga iyo karaamada umadda Soomaaliyeed, waxayna bulshada ku dhiirigalinaysaa ka fogaanshaha hadallada xanafta leh ee kicin kara ama dhaawici kara dareenka dadka iyo ka baaqsashada hurinta colaadaha” ayaa lagu yiri War-Saxaafadeedka Madasha ka soo baxay.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo Muxuu ugu baahan yahay Siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland ee kujira DFS?
Next articleDibad-bax ka dhan ah hay’adda NISA oo Muqdisho ka dhacay